ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा चितवनका केसीको निधन ! « Etajakhabar
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा चितवनका केसीको निधन !
प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०७६, बिहीबार ०९:२१
चितवनमा गएराति ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको निधन भएको छ भने दुई घाइते भएका छन् । ना१३प ६७०३ नंको मोटरसाइकललाई नम्बर नखुलेको ट्रकले भरतपुर महानगरपालिका–१० सिर्जनाचोकमा ठक्कर दिएको थियो ।
ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका भरतपुर महानगरपालिका–४ यज्ञपुरीका भविस केसीको भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको छ । मोटरसाइकलमा सवार तनहुँ आबुखैरहनीका २२ वर्षीय सुशान्त अधिकारी र १९ वर्षीय प्रशान्त अधिकारी घाइते भएका छन् । उनीहरु दुवैको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ ।
घाइते प्रशान्तको अवस्था गम्भीर र सुशान्तको अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ठक्कर दिने ट्रक र ट्रकका चालक फरार रहेकाले खोजी कार्यलाई तीव्र पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
कारागार कार्यालय भरतपुरका एक कैदीको निधन भएको छ । निधन हुनेमा सोलुघर भई कास्कीको पोखरा बस्ने ५६ वर्षीय अर्जुन सुनार रहेका छन् ।
क्यान्सरका रोगबाट पीडित उनलाई जेठ ११ गते उपचारका लागि चितवन ल्याइएको थियो । कर्तव्य ज्या न मुद्दामा सजाय भोगिरहेका सुनारको उपचारकै क्रममा बुधबार राति ८ः३० बजे क्यान्सर अस्पताल चितवनमा निधन भएको हो । मृ तकको श व परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पतालमा राखिएको छ ।
पहिरोका घाइते भन्छन् : राति १२ बजे ‘लास्ट बर्थडे वीस’गर्यौं, होसमा आउँदा हिलोमा गाडिएका रहेछौँ
२६ असार २०७७, शुक्रबार १९:०५
काठमाडौंमा शुक्रवार संक्रमितको डाटा, यस्तो छ अवस्था
२६ असार २०७७, शुक्रबार १७:०७